Mmiri Iju Mmiri 100 Watt, 100 Watt Led Light, Light Florist Light Manufacturers and Suppliers in China
Nkọwa:100 Watt nwere Iju Mmiri n'èzí,Ìhè Iju Mmiri 100 Watt,Iju Mmiri,,,
Home > Ngwaahịa > Iju Mmiri Iju Mmiri > Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n&#39;èzí
Ngwaahịa nke Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n'èzí , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 100 Watt nwere Iju Mmiri n'èzí , Ìhè Iju Mmiri 100 Watt suppliers / factory, wholesale high-quality products of Iju Mmiri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
IP65 Led Ìhè Mmiri 40W 60W 80W  Kpọtụrụ ugbu a
100W 120W 150W Led Ìhè Ìhè nke 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ogige Ihu Mmiri Ezumike n'Ọdọ Mmiri Ezumike 6500k  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Mmiri Ledanụ 75 Watt 80Watt 4000K  Kpọtụrụ ugbu a
ETL Ìhè Ìhè Ọdọ 100W 12000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Oriọna Igwuregwu Iju Mmiri Stadium 150W 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ubi na-ere ọkụ na mmiri maka ire 100W 12000LM  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ìhè Ìhè nke mgbago elu na osisi nkwado  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ìhè Ìhè nke Igwe Ọdọ 100000lm 4000k  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè 70W Maka 84lọ 8400lm 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
200W Light Light Light Led na Sensor 24000LM  Kpọtụrụ ugbu a
ETL Portable Light Flood Light for Backyard 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Edobere ọkụ Ighalo Nke Udiri 100W 13000LM  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ọhụụ Na-apụta n'Ọdọ Mmiri Iju Mmiri Ngwunye  Kpọtụrụ ugbu a
80W N'elu nchekwa Backyard Iju Mmiri ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
100W Mmiri nke Mmiri na-ekpuchi  Kpọtụrụ ugbu a
Iju mmiri anyị 80w Led nwere ike ịmịpụta ihe karịrị ọhụụ nke 9600lm. Nke a Led Flood Light 60w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe Ọdụdọ a nke 40w nwere eriri igwe anaghị agbazi, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere...
Iju mmiri anyị nke Led 150w nwere ike ịmịpụta ruo 18000lm na-enwu nke ọma. Iju mmiri nke Led 100w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè nke Ligharị 120w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya ihe...
Iche Iche Nnukwu Mmiri nke Ogige nke Gwara anyị nke 80w nwere ike ịmịpụta ọganiihu dị elu nke 9600lm. Nke a 80w Led Ìhè Light 6500k bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a dugara N'èzí Yard Iju Mmiri Ìhè na a mgbanwe metal mgbodo,...
Ìhè Ìhè nke 80w 80w anyị nwere ike ịmịpụta ọmarịcha 9600lm. Nke a Ugwu Ihu Iri Late 75 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe Ọdụdọ 4000k a nke nwere nkwụ ọtọ , nke kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya, can nwere ike...
Kit Kit Light Kit 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Igwe ọkụ a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe ọkụ a 100w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe nkuku ị choro. Site na...
Ìhè Ihu Igwe mmiri anyị nke 150w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 18000lm. Stadiumgbọ egwuregwu Light Light bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Igwe ọkụ a na-enwu enwu n’elu mmiri 150w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,,...
Ogige ọkụ Iju Mmiri Anyị 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Igwe mmiri a 100 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Ìhè a na-ere ere ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe...
Ìhè Ibe Anyị n’osisi 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ogige Ìhè a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Light-arịọnụ Ọdọ . Ọkwọ ụgbọ ala a na-enye ìhè ya na...
Light Bulbs Walmart Walmart anyị 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Ìhè a Gburugburu bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Igwe ọkụ 90w . Igwe a na- eweta...
Ìhè nke Igwe mmiri anyị maka 70lọ 70w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 8400lm. Ìhè Light Halogen Bulb a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Costco Ìhè . Igwe ọkụ a na-enwu 80w...
Ìhè Ihu Igwe anyị nke nyere 200w nwere ike iwepụta ihe ruru puku 24000lm. Nnukwu ọkụ Iju Mmiri a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè na Sensor . Ọkụ mmiri zmodo a ya na...
Igwe ọkụ Ibe Anyị 150W nwere ike ime ka ihe dị elu ruo 18000lm. Ihu Igwe mmiri a na-eche ihu n’azụ 150w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Ìhè nke Na-enwu n'azụ...
Ìhè Ibe mmiri anyị 100w nwere ike imepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè igwe ọkụ a rutere 100w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Lightlọ ndozi ọkụ ide mmiri 100w . Igwe...
Ọnụahịa otu: USD 51 / Piece/Pieces
Bbier Na- asọpụrụ Iju Mmiri 100W na-abịa na oghere dịka 120 degree na 13000 Igwe ọkụ na-enwu gbaa (dị ka halogen 300W). Nke a Dimmable Dugara Iju Mmiri Ìhè nwere ike ịbịa na a ụbọchị ìhè sesor ma ọ bụ ngagharị ihe mmetụta ịzọpụta 80% na ụgwọ ọkụ nke...
Ọnụahịa otu: USD 37 - 38 / Piece/Pieces
Bbier ọhụrụ imewe Nchekwa Iju Mmiri 80W nwere banyere 9600lm ma dochie 250W MH HPS HID bulbs. Mmiri Iju Mmiri a azụ azụ na- eji ọkwọ ụgbọala IC na voltage ọsọ ọsọ bụ 120VAC / 277VAC / 240VAC. Ịnwere ike iji Ogo Mmiri a na- asọpụta n'èzí na...
Ọnụahịa otu: USD 49 - 49.5 / Piece/Pieces
Ebube Mmiri anyị n'èzí 100W nwere ike mepụta elu 12000lm. Nke a 100w Led Iju Mmiri Bulbs bụ zuru okè nnọchi maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ. Anyị na-eji nnukwu oriọna oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè anyị Mpụga Na-enwu Iju Mmiri . Otutu otutu...
China Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n'èzí Ngwa
Mmiri Iju Mmiri 100 Lt n'èzí bụ DLC 4.3 Akara na ETL-Depụtara, na-eme ka ha bụrụ ndị ruru eru maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, obodo, ala, na gọọmenti etiti gọọmentị redio resrofit! 1 00 Watt Led Iju Mmiri na- azọpụta ego, na-azọpụta ike, a na-akwụghachikwa ụgwọ ọrụ gị nke ọma. Mmiri Iju Mmiri nwere IP66 Rating nke pụtara na e nwere nchebe zuru ezu pụọ n'ájá na ọdụ ụgbọ mmiri dị ike.
100 Watt nwere Iju Mmiri n'èzí Ìhè Iju Mmiri 100 Watt Iju Mmiri